နွမ်းပါးသော ရုပ်ရှင် ဗီဒီယိုလောကသား ၁ဝဝဝ ကျော်တို့ သင်္ကြန်တွင်း နေထိုင်စားသောက်နိုင်ရန် အစ? - Yangon Media Group
နွမ်းပါးသော ရုပ်ရှင် ဗီဒီယိုလောကသား ၁ဝဝဝ ကျော်တို့ သင်္ကြန်တွင်း နေထိုင်စားသောက်နိုင်ရန် အစ?
မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်း အရုံးနှင့် ရုပ်ရှင်လောကသားများစု ပေါင်းကာ နွမ်းပါးသော ရုပ်ရှင်ဗီ ဒီယိုလောကသားများကို သင်္ကြန် တွင်း နေထိုင်စားသောက်နိုင်ရန် အတွက် အစားအသောက်များလှူ ဒါန်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ နွမ်းပါးသော ရုပ်ရှင်ဗီဒီယို လောကသား ၁ဝဝဝ ကျော်ကို ဆန်၊ ဆီ၊ ငါးသေတ္တာ၊ အသင့်စား ခေါက်ဆွဲခြောက်များ လှူဒါန်းခြင်း ကို ဧပြီ ၄ ရက်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံး၌ ပြုလုပ်ခဲ့ ကြောင်းသိရသည်။
”ဒီလိုလှူဒါန်းမှုက နှစ်စဉ်ပြု လုပ်နေကြအလှူလေးတစ်ခုပါ။ အခုလိုမျိုး သင်္ကြန်ကာလနီးလာပြီ ဆိုရင် ရုပ်ရှင်လောကအတွင်းမှာ ရှိတဲ့နွမ်းပါးအနုပညာရှင်တွေသ င်္ကြန်တွင်းမှာ စားသောက်နေထိုင် နိုင်ဖို့အတွက် ကူညီတဲ့သဘောပါ။ ရုပ်ရှင်လောကသား ဘယ်သူမဆို လာယူလို့ရပါတယ်။ နွမ်းပါးတဲ့သူ တွေကိုပဲပေးတာဆိုပေမယ့် တချို့ တွေလည်း လာယူကြတာတွေရှိ တယ်။ အဲဒီလိုမျိုးတွေကြရင် ဘာ မှမပြောပါဘူး။ လှူတာဖြစ်တဲ့ အ တွက် လှူလိုက်တာပါပဲ”ဟု မြန်မာ နိုင်ငံ ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးမှ ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဦးအေးကြူလေးက ပြောသည်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသော အနုပ ညာရှင်များအား လှူဒါန်းရာတွင် တစ်ဦးလျှင် ဆန်ငါးပြည်၊ ဆီ ၆ဝ ကျပ်သား၊ ငါးသေတ္တာဘူး ငါးဘူး၊ အသင့်စားခေါက်ဆွဲခြောက် တစ် ဖာ အစရှိသည်တို့ကို လှူဒါန်းခဲ့ ကြောင်း သိရသည်။
နွမ်းပါးရုပ်ရှင်လောကသား များအား သင်္ကြန်မတိုင်မီ ယင်းကဲ့ သို့လှူဒါန်းနိုင်ရန်အတွက် မြန်မာ နိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးမှ အနု ပညာရှင်များထံမှ အလှူငွေများ ကောက်ခံခြင်းနှင့်အတူ တခြား သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များနှင့်မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအ ရုံးတို့စုပေါင်းကာ ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။ ယခင်နှစ်များက ဆင်းရဲနွမ်း ပါးအနုပညာရှင်ရာဂဏန်းလောက် သာ လှူဒါန်းမှုများပြုလုပ်ပေးနိုင် ခဲ့သော်လည်း ယခုနှစ်တွင် အနု ပညာရှင် တစ်ထောင်ကျော်အား လှူဒါန်းနိုင်ရန်ဖြစ်ကြောင်း သိရ သည်။